Somalia online: War deg deg ah: Ciidamada Gaarka ah Shabaabul Mujaahidiin oo Caawa Howlgallo ka wado gudaha degmooyinka ay AMISOM Muqdisho ka maamusho.
War deg deg ah: Ciidamada Gaarka ah Shabaabul Mujaahidiin oo Caawa Howlgallo ka wado gudaha degmooyinka ay AMISOM Muqdisho ka maamusho.
Written by Administrator Saturday, 27 August 2011 19:17
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa caawa Howlgallo ballaaran ka wada degmooyin katirsan magaalada Muqdisho oo ay AMISOM maamusho.
Qaraxyo waaweyn ayaa caawa siyaaba kala duwan uga dhacaya degmooyinka X/Jajab,X/weyne,Madiina,Waaberi iyo meelo kale.
Saraakiil katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo lasoo xariiray Idaacadda Islaamiga Andalus ayaa sheegay in caawa wadnaha laga gooyay Cadawga shisheeye iyo xaabadooda maadaama goobihii halbowlaha u ahaa.
Meelaha qaraxyadu ka dhaceen waxaa kamid ah Hotelka Madiina oo ay jiifsadaan xildhibaano iyo wasiirro katirsan DKMG ah.
Taageerayaasha AMISOM ayaa markii ay ciidamada mujaahidiinta faarujiyeen difaacyada Muqdisho farxad muujiyay halka Mujaahidiinta iyo shacabkooda ay ogaayeen in isbaahinta cadawga fursad siin doonto mujaahidiinta u taagan in cadawga ay calooshiida ku beegsadaan arrinkaasi oo hadda ifafaalihiisa ladareemay.
Petraeus retires from US military ahead of CIA post
China jails two more Tibetan monks over fire death
Cannibal Peter Bryan killed Broadmoor Hospital inmate
Rajiv Gandhi murder: Court stays hanging of plotters
New Zealand Press Association closes after 131 years
East Africa famine: Ikea makes record $62m aid pledge
Rider Ben Gautrey killed in British superbike race
Palestinian wounds seven Israelis in Tel Aviv attack
High Court rejects Kenyan terror trial intervention
Strauss-Kahn gets passport back after US case dropped
GCSE results: Deborah Thorpe aged 6 passes GCSE maths
Indonesian Sharia police separate Aceh lesbian couple